Mareykanka oo Duqeyn Cirka ah ku dilay Hogaamiye Al Shabaab
KISMAYO, Somalia- Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday duleedka Kismaayo ay ku dishay Hogaamiye sare oo kamid ahaa Ururka Al shabaab.
Ilo katirsan militariga Mareykanka, ayaa VOA u sheegay in Duqeynta lagu dilay Bashiir Cali Jaamac Guuleed (Bashiir Dheere), oo ahaa Taliye Ku Xigeenka Ururka Al Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose.
Taliska Militariga Mareykanka ee Geeska Africa (US AFRICOM), ayaa sheegay in weerarka lagu dilay Bashiir Dheere uu ka dhacay meel ku dhaw deegaanka Kanjaroon Isniintii lasoo dhaafay, 26-ka September, islamarkaana uu ahaa mid Is-difaacid ah.
Weerarka waxaa lagu dilay Bashiir Dheere iyo 3 katirsanaa Illaadiisa, waxaana uu ka danbeeyay duulaan ay Shabaab ku qaadeen saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Somalia.
AFRICOM wuxuu sheegay in Al Shabaab weerar ku qaadeen saldhig ay joogaan Tababarayaal military oo u dhashay Mareykanka iyo ciidamo katirsan kuwa DFS.
Warsidaha Garowe Online, oo warbixintan soo qoray Isniintii, waxaana Nuqul kamid ah xigtay Long War Journal, oo ka faallooda arrimaha difaaca.
Deegaanada ku yaallo duleedka galbeed ee Kismaayo ayaa waxaa mudooyinkii danbe ka dhacayay weeraro cirka ah iyo dagaallo toos ah oo u dhaxeeya Al shabaab iyo ciidamada Mareykanka.
​Madaxweynaha Galmudug oo eedeeyay Puntland [Dhagayso]
Soomaliya 28.09.2016. 23:41
CADAADO, Somalia- Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay howlgal maanta ka dhacay Bariga magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug, kaasoo lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen mallayshiyaad katirsan ururka Al Shabaab.
Howlgalkan oo ay ...
Al shabaab oo shaacisay markii ugu horeysay sawirka argagixiye Godane
Soomaliya 26.06.2017. 23:51
Diyaarad Drone ah oo ku dhacday duleedka Kismaayo
Soomaliya 16.10.2016. 13:40
Dowlada Puntland oo ka hadashay dagaalka Galkacayo
Puntland 07.10.2016. 17:19
Mareykanka oo iska difaacey eedeyn uga timid Galmudug iyo dowlada Federaalka
Caalamka 29.09.2016. 07:14